Mitemo yaMwari Inotibatsira Sei? | Mashoko Akanaka
Mutauro Wemasaini wokuAlbania
Mutauro Wemasaini wokuEl Salvador
Mutauro Wemasaini wokuGuatemala
Mutauro Wemasaini wokuKorea
Mutauro Wemasaini wokuPanama
Mutauro Wemasaini wokuSerbia
1. Nei tichida kutungamirirwa?
Chokwadi cheBhaibheri chinogona kutibatsira sei kuti tisaisa upenyu hwedu uye hwevamwe pangozi?—PISAREMA 36:9.
Musiki wedu akachenjera kutipfuura. Zvaari Baba vane rudo, ane hanya nesu. Uyewo, haana kutisika kuti tirarame tisingatungamirirwi naye. (Jeremiya 10:23) Saka sezvinongoita mwana mudiki kuti anoda kutungamirirwa nevabereki, tose tinoda kutungamirirwa naMwari. (Isaya 48:17, 18) Kutungamirirwa kwatinoitwa nezvinotaurwa neBhaibheri chipo chinobva kuna Mwari.—Verenga 2 Timoti 3:16.
Mitemo yaJehovha inotidzidzisa nzira yakanakisisa yokurarama iye zvino uye inotiratidza mawaniro atingaita mibayiro isingagumi munguva yemberi. Sezvo takasikwa naMwari, zvakanaka kuti tikoshese kutungamirirwa kwatinoitwa naye.—Verenga Pisarema 19:7, 11; Zvakazarurwa 4:11.
2. Shoko raMwari rinotitungamirira sei?
Chimwe chokwadi chiri muBhaibheri chinotiratidza izvo Mwari anoda kuti tiite mumamiriro ezvinhu akawanda. (Dheuteronomio 22:8) Tinofanira kushandisa mano okufunga kuti tinzwisise zvatinoudzwa kuti tiite nechimwe chokwadi chiri muBhaibheri. (Zvirevo 2:10-12) Somuenzaniso, Bhaibheri rinodzidzisa kuti upenyu chipo chinobva kuna Mwari. Chokwadi ichocho chinogona kutitungamirira tiri kubasa, kumba uye patinenge tiri parwendo. Chinoita kuti tingwaririre kusaisa upenyu hwedu uye hwevamwe pangozi.—Verenga Mabasa 17:28.
3. Ndeipi mirayiro miviri inokosha?
Jesu akataura nezvemirayiro miviri inonyanya kukosha. Wokutanga unobudisa pachena chinangwa cheupenyu, kureva kuti kuziva Mwari, kumuda uye kumushumira takatendeka. Murayiro uyu wokutanga unofanira kufungwa nezvawo pazvisarudzo zvose zvatinoita. (Zvirevo 3:6) Vaya vanorarama maererano nemurayiro uyu vanova shamwari dzaMwari, vanowana mufaro wechokwadi uye upenyu husingaperi.—Verenga Mateu 22:36-38.
Murayiro wechipiri unogona kuita kuti tigarisane nevamwe zvakanaka. (1 VaKorinde 13:4-7) Kushandisa murayiro wechipiri uyu kunosanganisira kutevedzera Mwari pamabatiro aanoita vanhu.—Verenga Mateu 7:12; 22:39, 40.
4. Mitemo yaMwari inotibatsira sei?
Mitemo yaMwari inodzidzisa mhuri zvadzingaita kuti dzibatanidzwe nerudo. (VaKorose 3:12-14) Shoko raMwari rinochengetedzawo mhuri nokudzidzisa imwe pfungwa yokuti, vakaroorana vanofanira kugara vose zvachose.—Verenga Genesisi 2:24.
Nokutevedzera zvinodzidziswa neBhaibheri, tinogona kuchengetedza pfuma yedu uye rugare rwemupfungwa. Somuenzaniso, kazhinji vashandirwi vanoda vashandi vanotevedzera zvinotaurwa neBhaibheri panyaya yokutendeseka uye kushanda nesimba. (Zvirevo 10:4, 26; VaHebheru 13:18) Shoko raMwari rinotidzidzisawo kuti tigutsikane nezvinhu zvinonyanya kukosha uye kuti tikoshese ukama hwedu naMwari kupfuura pfuma.—Verenga Mateu 6:24, 25, 33; 1 Timoti 6:8-10.
Kurarama maererano nemitemo yaMwari kunogona kuchengetedza utano hwedu. (Zvirevo 14:30; 22:24, 25) Somuenzaniso, kuteerera mitemo yaMwari inorambidza kudhakwa kunotichengetedza kuti tisaita zvirwere zvinouraya uye tsaona. (Zvirevo 23:20) Jehovha anotibvumira kunwa doro asi zvine mwero chete. (Pisarema 104:15; 1 VaKorinde 6:10) Mitemo yaMwari inotibatsira nokutidzidzisa kungwarira zvatinoita uyewo zvatinofunga. (Pisarema 119:97-100) Zvisinei, vaKristu vechokwadi havangoremekedzi mitemo yaMwari kuti zvingovabatsira. Vanoita izvozvo kuti vakudze Jehovha.—Verenga Mateu 5:14-16.
Mwari anoti kudini nokubvisa nhumbu, kuisirwa ropa, uye upenyu hwemhuka?